Posted by: chhepyastra weekly | फ्रेवुअरी 4, 2012
सरकार उल्टो दिशातिर लागि रहेको छ
कुलप्रसाद के.सी. ‘सोनाम’, पोलिटव्यूरो सदस्य- एनेकपा माओवादी
० के.स.को बैठकपछि प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेताहरु देश दौडाहामा निस्किएका छन्, के पार्टीभित्रको विवाद टुङ्गएिको हो ?
हाललाई टंुगिएको छ । जनताको संघीय गणतन्त्रको संविधान बनाउने कुरो साम्राज्यवाद, सामन्तवाद विरोधी सारतत्व भएको संविधान जारी गर्ने सर्तमा हामी एकढिक्का भएका छौा ।
०	सरकार को राजीनामाको कुरा कार्यान्वयन भए नि ?
जारी नै छ, त्यसको प्रक्रिया पुर्याउने कुरा हुन्छ, यसको विकल्पमा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीन सरकारको नारा दिने भनेका छौा । पार्टीले जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरेर सरकारलाई नयाा रूप दिने भनेको हो । चार बुादेको जगमा बनेको सरकारको आधारमा होइन भनेका छौा ।
०	समायोजनको नाममा जनमुक्ति सेनालाई निकालिादैछ, के भन्नुहुन्छ ?
समायोजनको ठूलो प्रक्रिया त बााकी नै छ, त्योभन्दा अगाडि रिग्रुपिङ नटुङग्याई गर्दा गल्ती हुन्छ । त्यसलाई कामय राख्दै अगाडि बढ्ने सवालमा सहमति कायम गर्ने र जाने भन्ने पार्टी निर्णय हो । सरकारले उल्टो दिशातिर लागिरहेको छ । सत्तालिप्साको खेल र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खेलबाड, केयौा विधेयकमा दलालीकरण देखिएकोले यो सरकार विघटन नै हुनुपर्छ ।
०	तपाईंहरू कराउादै गर्ने सरकारले आˆनो लक्ष्य पूरा गरी छाड्ने देखियो नि ?
सरकारले दुर्गति भोग्दै छ । केही पपुलिष्ट प्रोग्राम दिनखोजिरहेको छ हेरौा अझै । हेलो सरकारमा १०० जनाले पनि कल गर्न छोडिसके । यसको मतलब सरकार गर्न सक्ने खालको होइन भन्ने प्रमाण हो । सहमतिलाई मुख्य बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको जगमा बनाउने कि विदेशी इशारा चल्ने यी दुई मुद्दा नेपालका अहिलेका प्रमुख मुद्दा हुन् । यो सरकार दलालीकरणबाट प्रेरित छ भने कुरा त ७ बुादेबाट र तिनका ल्याकत र संविधानसभामा तिनले प्रस्तुत गर्ने विधयेकहरूले नै पुष्टि गर्छ । यो सरकार कसैको इशारामा टिकिराखेको छ, त्यसैले यो कसैको कठ्पुतली बनेको छ भन्ने हो ।
०	आˆनै पार्टी सरकार छ तपाईंहरूले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको छैन पार्टीको साख गिरेन र ?
यही विषयले पार्टीभित्रको मतभेद चरमचुलीमा पुर्यायो, सडकमा पनि गयो । जुन उद्देश्यका साथ सरकारलाई पठाइएको थियो । त्यो विपरित दिशामा गएपछि नै पार्टीभित्र संघर्ष सुरु भयो । सडकमा पनि व्यक्त भयो । त्यसकारण पार्टीभित्रको विवादलाई अलग ढंगले बुझ्नु राजनीतिक सेटमा भएको अन्तरका कारणले भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
०	पार्टी नीति विपरित जानेलाई किन कारवाही नगरेको ?
कारवाहीभन्दा यो चिन्तनगत सवाल हो । जुन विचारधारात्मक राजनीतिक रूपले जुन मिसनमा माओवादी पार्टी गठन भयो र जनयुद्धको विकास हुादै यहाासम्म आइपुग्यो । त्यसैमा सहकार्य गर्दै आएका जिम्मेवार कमरेडमा जुन विचलनको रूप देखिन्छ । त्यसैले अब पार्टीको संगठनात्मक पद्धति मान्ने कि नमान्ने भन्ने र राजनीतिक रूपले कसरी सोचिन्छ भन्ने बहस बनेको हुनाले यो नयाा बहसको विषय हो र यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपले लिएका छौा ।
०	पार्टीभित्र वर्ग विभाजन भयो भनेर के. स. मा कुरा उठ्यो कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
महान् शुद्धीकरणमा जान सबै तत्पर भएमा सम्भव छ । तर, आरोप-प्रत्यारोपमा मात्र टुङ्ग्याउने खेल भएमा अब यो रोकिादैन, विकृति अझ बढेर जान्छ ।
०	ठूला नेता नै विलासितामा लागे भनिन्छ के भन्नुहुन्छ नि ?
हो ती नेताले अब आˆनो वर्ग तथा र ध्येय नभूलेर पछाडि र्फकने साहस गर्नुपर्छ । नयाा क्रान्तिकारी बन्ने बाटो हो । यही विषयमा पार्टीमा दबाब, संघर्ष, अन्र्तसंघर्ष चलेको हो ।
०	जनसंविधान र जनविद्रोह सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यो सम्भव छ । यो नभएमा, नेपालको कुनै पनि समस्या हल हुनेवाला छैन । आयोगको पङ्गुता पनि देख्नुभयो । झगडा गर्ने आयोग बनाएर के काम । यस्ता आयोग बनाएर समाधान निस्किादैन । नयाा विचारधारा र बहस सबै पार्टीभित्र चलाउन जरुरी भइसकेको छ ।
०	आˆनै पार्टीको विवादमा रुमल्लिएका बेला राज्यको विवाद कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
राष्ट्र भनेको एउटा प्रवृत्ति हो । पार्टीभित्र पनि तिनै प्रवृत्तिका मान्छे छन् । नेपालका प्रमुख दुई मुद्दा दलाल, नोकरशाही प्रवृत्तिको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा छन् । अरु पार्टीमा पनि हेर्नुस् यी विषयलाई लिने सवालमा अन्तरद्वन्द्व छ । क्रान्तिको मिसनबाट आएको पार्टी भएकोले हाम्रो पार्टीमा अलिकति दायााबायाा आउादावित्तिकै यस्ता उथलपुथल आउनु स्वाभाविक छ । किनकि माओवादी पार्टी कोल्याप्स हुनु भनेको राष्ट्रको एउटा ठूलो हिस्सा कोल्याप्स हुनु हो । जनताको मुक्तिको पक्षमा नै जनताले साथ दिएको क्रान्तिमा भाग लिएको र ठूलो आशा बोकी जनतामा जन्मिएको माओवादी पार्टी हो । यो मिसनबाट कोही विचलित हुनुहुन्न भन्ने हो । केही मान्छे विलासितातिर पुगे भन्ने आवाज आएको छ त्यो सााचो हो ।
०	यही विश्लेषणमा रहेर पार्टी फुट्छ भनिन्छ नि ?
माओवादी पार्टीको मूल प्रवृत्ति भनेको क्रान्तिकारी धारालाई नेतृत्व दिने कुरा नै हो । केही प्रवृत्ति यताउता लाग्ने, विचलित हुने संसद्वादमा गएर टुङ्गनिे कुरालाई नकार्न सकिन्न किनकि वस्तु दुई भागमा विभाजित हुन्छ । अहिलेको एकता पनि यही सैद्धान्तिक एकतासित गाासिएको हुनाले यो विषय हल गर्न हामी तत्पर छौा भनेर मुख्य नेतृत्वदेखि सबैले एक पटक इतिहासको रक्षा गरौा र विरासतहरू मेटौा भन्ने सहमति भएको छ ।
०	जनसत्ताले गरेको निर्णय सरकारले लागू गर्ने कुरा अदालतले उल्टायो, के भन्नु हुन्छ ?
अदालतका केही निर्णय सकारात्मक पनि होलान् । अदालत शक्तिकेन्द्रको रूपमा उदय हुन खोजेको छ, यो राम्रो विषय होइन । सरकार आˆनै निर्णयबाट पछि हाट्नु भनेको त पङ्गु बन्नु हो । बरु सरकारबाटै हट्नुपर्छ तर निर्णयबाट पछि हट्नु हुन्न । निर्णय गर्दा विवेक प्रयोग गरेर मात्र गर्नुपर्छ । निर्णय गरेर फेरि पछि हट्दा त्यो सरकार काम लाग्दैन ।
० जनसत्ता, जनअदातल र जनपरिषद् ब्यूाताउन खोजेको आरोप छ नि ?
त्यो ठीक हो । यदि समाधान निकाल्न राजी भएनन् भने जनसत्ताले गरेको निर्णय लागू हुन्छ, जो जनताले गरेका निर्णय हुन् । नेपालमा ठूलो प्रतिक्रान्तिकारी हिस्सा उदय हुन थालेको छ । तर, यसले गृहयुद्धलाई थेग्न सक्दैन । हामी जनताभन्दा बाहिर रहन सक्दैनौा । जनतालाई मर्का पर्यो भने जनताको पक्षमा उभिन पर्यो नि हामी तयार छौा । जनसत्ताले गरेका निर्णय सारा जनताले मान्न सहमति गरेको हो । कुनै शक्तिले उल्लंघन गर्न थालेपछि त्यसको विकल्प त खोज्नु पर्यो नि । त्यसैले, आवश्यक परे जनसत्ता ब्यूताउनेदेखि जनअदालत बनाउने समानान्तर सरकार बनाउने अधिकार जनतालाई छ, कसैले रोक्न सक्दैन । राजतन्त्रजस्तो निरङ्कुशताले त सकेन भने संसद्वादी दलहरुले गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो ।
०	जेठ १४ मा संविधान बन्ने छााट देखिादैन, के जनविद्रोह हुन्छ त ?
जनताको बीचमा गएर एउटा मस्यौदा दिएर फेरि नयाा संविधानको रूपरेखा दिनुपर्छ त्यो नमान्ने तत्वमाथि जाइलाग्ने हुनसक्छ । प्रतिक्रान्ति आउन थाले क्रान्ति अनिवार्य छ, त्यसलाई हामीले जनताको जनविद्रोह भनेका छौा । त्यो अनिवार्य हो कसैले रोकेर रोकिन्न ।
०	अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
राष्ट्रले मुक्ति पाउनको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनतासहितका जनताको संघीय गणतन्त्रको संविधानको लागि त्यसको पक्षमा हामी सबै उभियौ । इतिहासले हामीलाई यो ड्युटी दिएको छ, त्यो पूरा गरौा भन्न चाहन्छु ।